Ogaden News Agency (ONA) – Maxaad Kala Socotaa Xaalada Gobolka Afdheer Ee Wadanka Ogadenia?
Posted by Dulmane	/ July 28, 2016
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Afdheer ee wadanka Ogadenia ayaa sheegaya in guud ahaan gobolka ay kajiraan dhibaatooyin badan oo ciidanka gumaysigu ugaysanayaan shacabka ku dhaqan Gobolka Afdheer, Xog rasmi ah oo soogaadhay Wakaalada Wararka Ogadenia (ONA) ayaa tilmamaysa in Gobolka ay ka jiraan dhibaatooyin aan laqiyaasi karin oo lasoo daristay shacabka ku dhaqan Gobolka Afdheer.
Gobolka Afdheer ee Wadanka Ogadenia ayaa dhibaatooyinka badan lawadaaga Gobollada kalee Ogadenia wuxuuse dheeryahay arimo dhowr ah oo inta maamul kusheega maqaar saarka ah uu jirayba Gobolka hadheeyay waxayna arimahaasu noqdeen kuwo dhaqan ahaan Gobolka uga hirgalay.
Sida aan lawada socono waxaa guud ahaan wadanka Ogadenia kajira gumaad ba’an oo dadka shacabka ah lagu hayo waxaase Gobolka Afdheer u dheer gibir (Baad & Boob Hantiyeed) aan kala joogsi lahayn oo si xoog ah lagaga dhaqan galiyay Gobolka halka Gobollada kale meeshii gibirka loogu badalay dhac joogta ah oon geed loogu soo gabanin.
Dhinaca kale ciidanka dhaqanka xun ee kahowlgala Gobolka Afdheer ayaa Gobolka kala dagaalamay dhamaan sunada lagu yaqaano dadka muslimka ah waxayna xidhay iyo handadaad kula kacaan qofkastoo labis ahaan iyo dhaqan ahaanba laga dareemo in uu noolaynayo sunada Nabigeenii Suuban Muxamad SCW.
Dhinaca kale ciidanka wayaanaha ayaa Iimaamkii masjidka wayn ee Dagmada Baaray iyo mu’adinkiiba mudo kabadan 20 bari lamaqan lamana garanayo meel ay geeyeen iyo in ay noolyihiin toona, sidoo kale ciidanka gumaysiga ayaa il gooni ah ku eega masaajida iyo dugsiyada qur’aanka halka ay gudaha gobolka kasameeyeen meelo lagu barto sida dhaantada lootumo.
Inkastoo guud ahaan wadanka Ogadenia laga mabnuucay ganacsigii hadana waxaa culays aad ah lasaaray dadka ree Afdheer manajiro qof loo ogolaaday in uu soogaliyo gobolka wax raashin ama dhar ah, waxaa kaloo Gobolka laga joojiyay dhamaan sayladihii ama suuqyadii xoolaha nool lagu kala gadan jiray.
Waxa loogu yeedho maamulada Gobolka iyo dagmooyinka Afdheer ayaa qofkay ku ogaadaan in uu meel kale xoolo u safriyay xabsiga dhiga kana dhaca wixii uu soo iibsaday waxayna miyiga kasamaysteen kuwo jawaasiis ah oo soo sheega qofkii xoolo usafriya dibada Gobolka, halka dadka baahan ee ree miyiga ah ay xoolahooda isku dayaan in ay usafriyaan wadanka Somalia oo Gobolka xuduud dheer laleh balse waxay shacabka arintaas kala kulmaan dhibaatooyin badan.
Dhinaca kale waxaa dhawaanahan Gobolka Afdheer kusoo batay kufsiga oo kajira guud ahaan wadanka Ogadenia balse si xowli ah hada uga socda Gobolka Afdheer waxaana ladiiwaan galiyay gabdho badan oo ciidanka wayaanuhu seejiyay mustaqbalkoodii u ifayay mana jiro qof hadal ama dacwad kagayn kara arimaha foosha xun ee Gobolka kasocda.
Iyadoo guud ahaan dhulka Ogadenia uusan kajirin wax xarumo caafimaad ah oo bixiya adeeg caafimaad oo tayo leh iyo goobo wax barasho toona hadana Gobolka Afdheer wuxuu meesha ugu dambaysa kaga jiraa gobollada caafimaad xumida iyo Jahligu uu dilooday lagamana yaqaano wax hay’ado samafal ah noocay doonaanba hanoqdeene taasoo lamid ah Gobolada kalee Ogadenia oo hay’adaha laga mabnuucay gabi ahaanba.
Waxaa kaloo Gobolka Afdheer oo ah Gobol qani ku ah xoolaha nool iyo khayraadka dabiiciga ah ayay dadkiisu noqdeen kuwa ugu liita dhinaca nolasha aas’aasiga ah waxaana caruurta iyo dhalinyarada ku dhaqan Gobolka Afdheer ka muuqda nafaqo la’aan daran iyo macaluul gaamurtay ood moodo inaysan waligood wax daryeel ah helin.
Sikastaba ha ahaatee dhibaatooyinka aan kasoo sheekaynay waxaa sabab u ah gumaysiga madow ee xooga kujooga wadanka Ogadenia dhibaatooyinkuna way sii socon doonaan inta uu gumaysigu haysto wadanka Ogadenia.